पूर्वप्रम शरीफ पक्राउ, पाकिस्तानमा नयाँ राजनीतिक उतारचढाव !
असार ३०, २०७५ बिगुल
पेसावर, पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफ पक्राउ पर्नुभएको छ । उहाँलाई शुक्रबार साँझ नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
उहाँलाई शुक्रबार पाकिस्तानको लाहोरस्थित विमानस्थलमा ओर्लिएलगत्तै पक्राउ गरिएको हो । उहाँसँगै आएकी छोरी मार्यम नवाजलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शरीफले पनि आफूलाई सेनाले पक्राउ गर्न सक्ने बताउनुभएको थियो ।
शरीफलाई हालैमात्र यहाँको एक अदालतले १० वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । इस्लामावादमा रहेको एक अदालतले केही समयअघि उहाँलाई १० वर्ष कारावासको फैसला गरेको हो ।
सो फैसलाको समयमा लन्डनमा रहनुभएका शरीफलाई हिजो स्वदेश फर्किएलगत्तै निणन्त्रणमा लिइएको छ । उहाँलाई यसरी पक्राउ गरिएपछि यहाँको राजनीतिमा भने नयाँ उतारचढाव आएको छ ।
पाकिस्तानमा यही जुलाई २५ मा संसदको निर्वाचन हुन लागेको छ । सो निर्वाचनको प्रचारप्रसार अभियान शुरु भइसकेको छ ।
निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा उहाँलाई यसरी नियन्त्रणमा लिएपछि यहाँको राजनीतिमा नयाँ उथलपुथल हुने अनुमान गरिएको छ ।
उहाँलाई १० वर्षे जेल सजायसँगै एक करोड अमेरिकी डलर जरिवाना पनि तोकिएको अदालतले जनाएको छ ।
श्रीमतीको उपचारका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफ बेलायतको लण्डनमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँकी श्रीमती क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ ।
प्रायः उतारचढावपूर्ण रहेको पाकिस्ताको राजनीतिक यात्रा सरिफको पक्राउपछि भने कता मोडिने हो भन्ने कौतुहल पाकिस्तानी नागरिकको रहेको बताइन्छ ।-रासस÷सिन्ह्वा
प्रकाशित : शनिबार, असार ३०, २०७५१२:५६
फेसबुकमा लाइभ गरेर आत्महत्या गरेको भिडियो भाइरल ! [भिडियो सहित]
चर्चित बलिउड गायक मिका सिंह दुबाईमा पक्राउ !
चर्चित नायिका श्रीदेवीको मृत्युका ५ ठूला रहस्यहरु…
इथियोपियाका प्रधानमन्त्री चीन आउँदै !
भारतमा भोलि देखि ६ दिनका लागि बैंक बन्द हुने !
कवि हुँदै ३ पटक प्रधानमन्त्री बनेका वाजपेयी अब सम्झनामा सीमित